Safal Khabar - खै कहाँ छ द्रुत विकास ?
प्रधानमन्त्री भन्छन्- आँखा खोले देखिन्छ
खै कहाँ छ द्रुत विकास ?
शुक्रबार, ०१ कार्तिक २०७६, ०७ : १९
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आँखा खोलेर हेरेमात्र सरकारले गरेको विकास देखिने दाबी गरे पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन। मुलुकका निर्माणाधीन विकास आयोजना पुरानै लयमा अघि बढिरहेका छन्। दुईतिहाइको बलियो सरकार गठन भएपछि सर्वसाधारणको जस्तो आशा थियो, त्यसअनुसार सरकारले द्रुत गतिमा काम गर्न सकेको छैन।
पहिलेदेखि नै निर्माणाधीन आयोजनाको गति ओली सरकारका पालामा झनै घटेको छ। विगत तीन वर्षको तुलनामा यो वर्ष सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च सबैभन्दा कम भएबाट पनि काम गराइ मन्द गतिमा भएको पुष्टि हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भने सार्वजनिक रुपमै पटकपटक सरकारले विकास निर्माणमा छलाङ मारेको बताइरहेका छन्।
नेकपाले बुधबार आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा सरकारले विकास गर्न सकेन भनेर आलोचना गर्नेहरुलाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मुलुकमा विकास र समृद्धिका लागि धेरै काम भएका छन्। आँखा चिम्लेर केही पनि भएको छैन भन्नेहरुले आँखा खोलेर हेर्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सामन्त वर्गले मात्र मुलुकमा केही पनि भएको छैन भनेर हल्ला पिटाएको आरोप लगाउँदै विकासका सवालमा बुढाबुढीलाई गएर सोध्न आग्रह गरे। ओलीले विकास निर्माणमा सरकारले छलाङ मारेको बताउँदै आए पनि न त सरकारी तथ्यांकले त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेको छ न सर्वसाधारणले नै काम भएको महसुस गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना (असोज २९) सम्ममा सरकारले पुँजीगत बजेट ४.३८ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा ७.१९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। गत वर्ष असोजसम्म २२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च भएकामा यो वर्ष १७ अर्ब ९७ करोडमा सीमित छ।
ओलीले विकास निर्माणमा सरकारले छलाङ मारेको बताउँदै आए पनि न त सरकारी तथ्यांकले त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेको छ न सर्वसाधारणले नै काम भएको महसुस गरेका छन्।
यो तथ्यांकलाई हेर्दा प्रतिमहिना डेढ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेटमात्रै आयोजनामा खर्च गर्न सकेका ओलीले विकास भएको भन्नु आफैंमा हास्यापद हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले स्वास्थ्य बिमा लागू गरेको, जनताको लगानीमा जलविद्युत् आयोजना बनिरहेका, ऊर्जामा जनतालाई सेयर दिएको, पोखरा र लुम्बिनीमा एयरपोर्ट बनिरहेको, फास्ट ट्र्याकको काम द्रुतगतिमा भइरहेको, पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन बिछ्याउने काम सकिएको, सयौं ठाउँमा पुल बनिरहेको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्दै काम नगरेको भन्नु पूर्वाग्रहमात्र भएको आरोप लगाए।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै देशभर विकासका आयोजना बनिरहेका छन्। सडक पिच भइरहेका छन्। खानेपानी, सिँचाइ, पक्की र झोलुंगे पुल निर्माण भइरहेका छन्। बजेट खर्च भइरहेको छ। यो यथार्थ हो। तर यसको गति कस्तो छ ? पुराना अस्थिर सरकारका पालामा जस्तै समयले घचेटेर हुने गरेको मन्द विकास निर्माण वा समयभन्दा चाँडो सिंगापुर वा मलेसियाको पछिल्लो विकास जस्तै ? प्रश्न यही हो।नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
१. पत्रकार पराजुलीको कथासङ्ग्रह ‘कुमाता’
२. कोरोनाको त्रास : जापानमा विद्यालयहरु छुट्टी, कन्सर्ट र पार्कमा भेला हुन प्रतिबन्ध
३. श्रीलंकाले एमसीसी सम्झौता नगर्ने
४. सिरियाको इडलिबमा ३३ जना टर्केली सेना मारिए
५. सीपी मैनाली सवार कार दुर्घटना नियोजित : माले
६. काँग्रेसले क्रियाशील सदस्यता आठ लाख पुर्‍याउँदै
७. गृहजिल्ला चितवन पुगेर अध्यक्ष प्रचण्डले भने– बामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान प्रधानमन्त्रीले एकदुई दिनमा मान्नुहुन्छ
८. फ्राइडे रिलिज : एक्लै आयो चलचित्र ‘धुलो’
९. प्याराग्लाइडिङ च्याम्पियनसीपमा नेपाल दोस्रो
५. खुमलटारमा सकियो प्रधानमन्त्री ओली बाहेक नेकपा शीर्ष नेताको छलफल
६. तीन घण्टाकै बिचमा माधव नेपालले किन भेटे ओलीलाई पटक–पटक ?